Xisaabinta Daruuraha: Wax walba Adeeg ahaan - XaaS | Laga soo bilaabo Linux
Software-ka tan iyo markii la abuuray waxaa si dabiici ah loogu qaybiyay 3 qaybood kuwaas oo kala ah: Nidaamyo, Barnaamijyo iyo Codsiyo. Tan dambena, markeeda, waxay si tartiib tartiib ah uga soo wareegtay Codsiyada: Asal ahaan, Websaydh, Isku-dhafan, oo u gudubtay Horumar iyo Qaybin.
Oo ay weheliso Codsiyada waxay u haajireen Cloud (Internet) Waa tagtay xoojinta fikrad ama qaab shaqo iyo ganacsi oo loo yaqaan "Wax walba Adeeg ahaan", oo inta badan loo yaqaan magaceeda iyo soo gaabinteeda Ingiriisiga sida: Wax kasta oo Adeeg ahaan ah ama Wax kasta oo Adeeg ahaan ah (XaaS).
1 Aragtida hadda jirta
1.2 Isku-dhafka iyo Isku-dhafka
2 Fikradaha La Xiriira
2.2 Software-ka Adeeg ahaan (SaaS, Software-ka Adeeg ahaan)
2.3 Madal ahaan Adeeg ahaan (PaaS)
2.4 Kaabayaasha Adeeg ahaan (IaaS)
Aragtida hadda jirta
XaaS hadda waa qaabka cusub ee suuqa xisaabinta daruurta iyo isbeddelka kobaca ee sanadaha soo socda ayaa saameyn weyn ku yeelan doona isgaarsiinta, Xogta Weyn iyo Internetka Waxyaabaha (IoT).
Tan iyo markii XaaS waa fikrad farsamo oo koobeysa dhowr fikradood oo la xiriira hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ee daruuraha, oo soo saarta habab cusub oo wax soo saar iyo ku kordhinaya qiime ururada, kuwa dawliga ah iyo kuwa gaar loo leeyahay.
Isku-dhafka iyo Isku-dhafka
XaaS lafteeda lafteeda, waxay tilmaamaysaa Adeegyada IT-ga ee badan iyo kuwa sii kordhaya ee Hay'adaha ay hadda ku helaan mahadnaqa internetka iyo isbeddelada weyn ee tan ay ku keento iyaga, moodellada ganacsiga iyo u weecashada xagga isku-buuqsanaanta.
Fahamka sida Isugeynta IT-ga midowga ama isku dhafka fikradaha IT-ga ama teknoolojiyada, inta badan Xarumaha Kumbuyuutarka ee Kaabayaasha (Xogta Datacenters), sida: Processing, Storage, Networks, Telecommunications, oo ku yaal hal madal oo jireed (Chassis, Machine) ama Hardware.
Iyo sida Ku-xirnaanshaha IT-ka ee kaabayaasha barnaamij-qeexan taas oo kala soocaysa howlaha kaabayaasha HW iyo nidaamka kuna soo koobaya heer Hypervisor hal qol.
Muuqaalkan cusub ee ah 'adeeg ahaan-adeeg ahaan' (adeeg ahaan) waa qaab ganacsi, kaas oo qaabdhismeedka Ururada iyo howlahooda looga fekero madal adeeg. Habka ugu halista badan wuxuu ku dhex jiraa qaab dhismeedka, hijrada, dhibaatooyinka badan ee soo food saara. Waana tan meesha ay moodka XaaS ka fiican tahay.
Isticmaalka qaabka XaaS ee Ururada ayaa leh faa iidada fududeynta xallinta dhibaatooyinka ka jira qaybta IT-ga, intaad ku sii socoto xaaladaha ay ku jiraan suurtagalnimada koritaanka iyo ballaarinta, kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh uga gudubto hal suuq (niche) una gudubto mid kale iyo hal nooc ganacsi oo kale.
Dhinaca kale, Qaabka XaaS wuxuu u oggolaanayaa miisaanka degdegga ah ee wajiga baahi dalab lama filaan ah, Xoreynta kheyraadka maareynta, taas oo u oggolaaneysa Ururadu inay si buuxda naftooda ugu huraan ganacsiga iyo koritaankiisa, halkii ay ka ahaan lahaayeen kaabayaasha dhaqaalaha.
XaaS waa qaab ganacsi oo meel walba yaal, oo bixiya joogitaan caalami ah iyadoo la adeegsanayo daruurta. Ku xoogan qodobada muhiimka ah ee kaabayaasha IT-ga taasoo ka dhigeysa inaysan caqabad ku noqon kobaca ganacsiga iyo isbadalka.
Fikradaha La Xiriira
Waxa jira fikrado badan, moodello ama teknoolojiyad la xidhiidha qaab-u-adeegsiga "adeeg ahaan" (adeeg ahaan). Taasi waa, inkasta oo XaaS-yada ugu caansan ay badanaa yihiin: Software-ka Adeeg ahaan (SaaS, Software-ka Adeeg ahaan), Platform-ka Adeeg ahaan (PaaS, Platform-ka Adeeg ahaan) iyo Kaabayaasha Adeeg ahaan (IaaS, Kaabayaasha Adeeg ahaan) noocyo badan ayaa soo baxa, kuwaas oo aan ka heli karno waxyaabaha soo socda:
Qalabka Adeeg ahaan (HaaS, Qalabka Adeeg ahaan)
Kaydinta Adeeg ahaan (SaaS)
Macluumaad ahaan Adeeg ahaan (DBaaS, Macluumaad ahaan Adeeg ahaan)
Soo kabashada Musiibada Adeeg ahaan (DRaaS)
Isgaarsiinta Adeeg ahaan (CaaS)
Shabakad ahaan Adeeg ahaan (NaaS)
Kormeer ahaan Adeeg ahaan (MaaS)
Kunteenar ahaan Adeeg ahaan (CaaS, Weelasha sida Adeeg ahaan)
Hawlaha Adeeg ahaan (FaaS, Hawlaha Adeeg ahaan)
Amniga Adeeg ahaan (SECaaS, Amniga Adeeg ahaan)
Kuwa kale oo aan aqoon ama la hirgelin badanaa waa:
Maareynta Adeeg ahaan (MaaS)
Ganacsi ahaan Adeeg (BaaS, Ganacsiga Adeeg ahaan)
Iyo qaabka kooban 3da fikradood ee waaweyn ama moodellada XaaS waxaa lagu sifeyn karaa inay yihiin:
Software-ka Adeeg ahaan (SaaS, Software-ka Adeeg ahaan)
Marka adeeg bixiyuhu bixiyo barnaamijyo ku shaqeeya daruuraha taasna macmiilku wuxuu kaga heli karaa aalado kala duwan, oo leh isweydaarsiyo khafiif ah (sida web browserka) ama is dhexgalka (API). Taasi waa, waxay maamushaa codsiyada iyo ilaha kale ee aasaasiga ah (Shabakad, Adeeg, Nidaamyada Hawlgalka, Kaydinta, iyo kuwo kale).
Madal ahaan Adeeg ahaan (PaaS, Qalab ahaan Adeeg ahaan)
Marka adeeg bixiyuhu bixiyo suurtagalnimada in lagu kaydiyo barnaamijyadeeda ama macmiilkiisa kaabayaasheeda daruuriga ah, halka macmiilku ku sii hayo xukunka iyaga. Bixiyuhu wuxuu daryeelaa maaraynta dhammaan ilaha kale ee aasaasiga ah.
Kaabayaasha Adeeg ahaan (IaaS)
Markuu adeeg bixiyuhu bixiyo hawlgalinta, keydinta, isku xirka iyo ilaha xisaabinta kale ee muhiimka ah taas oo uu macaamilku ku fulin karo kuna maamuli karo nidaamyada hawlgalka, keydinta iyo codsiyada.
Waxyaalahan oo dhan, waxaa noo cad in «Wax kasta oo Adeeg ah» ay abuurayaan isbeddel (hijro) hawlgallada IT-ga ee Ururada ee daruuraha (Internetka) iyada oo loo marayo barnaamijyada iskaashiga, oo laga heli karo meel kasta, iyada oo ay sabab u tahay hoos u dhigista kharashyada hawlgalka iyo hagaajinta habsami u socodka.
Taasna waxaa sii dheer, qaabka XaaS ee ku saleysan inta badan IaaS, PaaS iyo SaaS wuu sii ballaaranayaa, wuxuuna ku sii fidayaa dhammaan noocyada kala duwan ee loo bixin karo adeeg ahaan. XaaS waxay u fidineysaa faa iidooyinka Cloud Computing goob kasta ama habraacyada Ururada, taageerida ujeedooyinka ganacsi ee kala duwan, laga bilaabo Kheyraadka Aadanaha, ilaa Dhaqanka ama Amniga Kumbuyuutarka.
Soo koobid, XaaS waxay kadhigeysaa lama huraan in adeege kasta oo katirsan tikniyoolajiyada macluumaadka uu kudhamaado daruuraha, taas oo ku dambayn doonta sii xoojinteeda xitaa wakhti ka badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » XaaS: Xisaabinta Daruuraha - Waxwalba Adeeg ahaan
Nooca cusub ee Google Chrome iyo Chromium 74 ayaa durba la sii daayay